Fametrahana fitoniana hialana amin’ny savorovoro: mitaky ny tsy hamoahan’ireo kandidà voka-pifidianana ny Ceni | NewsMada
Fametrahana fitoniana hialana amin’ny savorovoro: mitaky ny tsy hamoahan’ireo kandidà voka-pifidianana ny Ceni
Nampahatsiahy indray. Tsy eken’ny eo anivon’ny Ceni ny famoahan’ny kandidà sasany ny voka-pifidianana. Voararan’ny lalàna izany sady ametrahan’izy ireo ahiahy.
« Mitaky amin’ireo kandidà izahay tsy hamoaka voka-pifidianana any aminy. Ekena fa zony izany, saingy tokony hampiasainy amin’ny fampihatana ny voka-pifidianana izany fa tsy havoaka tahaka izao… Miteraka savorovoro amin’ny sain’ny vahoaka izany”, hoy ny filoha lefitry yn Ceni, Rakotonarivo Thierry, omaly. Nohitsiny fa antso avo izany nefa koa efa voalazan’ny lalàna ka itakian’izy ireo amin’ny kandidà sy ireo mpanohana hampitsahatra ny famoahana voka-pifidianana. “Aoka ho tony ianareo ary hiandry ny voka-pifidianana vonjimaika havoakanay eto anivon’ny Ceni”, hoy ihany izy.
Hivoaka ny 20 novambra ny voka-pifidianana vonjimaika…
Natsidiny sahady fa tokony hivoaka any amin’ny 20 novambra, farafahatarany, ny voka-pifidianana vonjimaika avy eo anivon’ny Ceni. Ho hita eo ny tena fironan’ny vokatra amin’izany fotoana izany. Tombanana fa mialoha ny faran’ny volana, mety ho ny 29 novambra, kosa ny voka-pifidianana ofisialy eny anivon’ny HCC.
Ankoatra izany, nomena toromarika avokoa ireo tompon’andraikitra eny ifotony ny amin’ny tsy maintsy hametahana petadrindrina maneho ny voka-pifidianana amin’ny alalan’ny tatitra an-tsoratra (PV) ny eny anivon’ny birao fandatsaham-bato (BV) sy ny eny anivon’ny kaominina.
Manana fito andro aorian’ny 20 novambra ny HCC handinihana sy hamoahana ny voka-pifidianana ofisialy. Etsy andaniny, mbola manana dimy andro koa ireo kandidà hametrahana fitoriana sy fitarainana raha tsy manaiky izany voka-pifidianana ofisialy izany. Tokony hanomboka ny 4 desambra ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Hotanterahina ny 19 desambra kosa ny latsa-bato amin’izany.